Ukubuyekezwa Kwencwadi Engamanga
Sacramento, ngu-Antonio Soler
Ukuthi izigxobo ziheha kuwukubikelwa kwe-physics. Kusuka lapho umama wakho konke ukungqubuzana kwethu. Izikhundla ezidlulele kumuntu zigcina zihlangana nalowo muzwa ongavimbeki wemagnetism noma inertia. Okuhle nokubi kuveza izinhlu zabo zezimiso nezilingo nakho konke ...
Uhlu Lwezinye Izinto Ezilahlekile, uJudith Schalansky
Awekho amanye amapharadesi kunalawo alahlekile, njengoba uJohn Milton ayengasho. Noma izinto ezibaluleke kakhulu kunalezo eningasenazo, futhi anikwazi ukuzigcina. Izimangaliso zangempela zomhlaba ngaleso sikhathi ziningi lezo esigcina sizilahlekele noma sizicekele phansi kunalezo ezingaqanjwa namuhla kanjalo, enezela ...
I-Art of War Between Companies, nguDavid Brown
U-Sun Tzu wabhala incwadi yakhe ethi "The Art of War" emuva ngekhulu lesi-XNUMX BC. Izimpi eziningi kamuva, futhi kusukela ngekhulu le-XNUMX kuze kube namuhla, izingxabano ezintsha lapho kusetshenziswa khona ubuciko obuhle noma obubi ziyaphikisana phakathi kwezizwe ngezizwe noma izinhlangano zombuso. Sibe sesidlulela kwezobuciko...
Indlu Engunaphakade, kaJuri Slezkine
Ingoma kaDef with Dos ibuza ngokuzibuza ukuthi ngubani ohumushe izinkulumo zikaLenin. Kufanele ukuthi bekukhona umuntu owenze le nhlekelele obekungukufakwa kobukhomanisi. Futhi ngukuthi yebo, ngaphezu kweparody yomculo kukhona okungahambanga kahle, okungalungile ngokuphelele. Okokuqala ngoba ngiyazi ...
Ngaphandle kokwesaba, nguRafael Santandreu
Ukwesaba kwethu nakho kuhlukanisiwe, ngokungangabazeki. Ngempela yonke into ihlukanisiwe, okuhle nokubi. Futhi umgwaqo uyiluphu engapheli emuva naphambili. Ngenxa yomzwelo senza ukuzwa kwangaphakathi komzimba. Futhi kulowo muzwa ongakhululekile esiziveza wona, ngokwesaba, singafika ...
Ikhasi1 Ikhasi2 ... Ikhasi18 Okulandelayo →